10,6 Million Doolar Disney Cedes Legacy Cimilada Isboortiga Fox - TELES RELAY
ACCUEIL » DHAQAALAHA 10,6 Billion Disney waxay soo bandhigeysaa Fox's Legacy Sports Legends
For 10,6 Billion Disney Disney bixiyaasha Ciyaaraha Fox
Carin Gouany 4 May 2019
Disney sheegay sale in ay 10,6 21 billion of dhaxlay channels isboortiga gobolka furashada ah ee hantida maamulaha of Group Fox iyo Rafaa madadaalada ayaa ballan-qaaday in ay iska iibiso.
acquirer waa Group ee Sinclair, mid ka mid ah jilayaasha ugu waaweyn ee TV-ga maxaliga ah ee dalka Mareykanka, taas oo qaadan doona haysashada saldhigyada haysta xuquuqda baahinta maxalliga ah 42 kooxood ee horyaalka ugu waaweyn ee Mareykanka (NBA NFL, MLB iyo NHL).
Sida laga soo xigtay war-murtiyeedkii la sii daayay jimcihii, ayaa arrintani waxa ay diiwaan-gelisay xawaaladaha 3,8 ee dollar-ka 2018.
Wareegyadan isboortiga waxaa loo tixgeliyaa hanti qiimo leh, isboortiga ka hartay mid ka mid ah barnaamijyada yar oo weli soo jiidanaya daawadayaasha si ay u noolaadaan.
"Caqabadaha macaamiisha ayaa horumariyay," ayuu yiri Chris Ripley, oo ah madaxweynaha Sinclair, isaga oo soo xigtay in la sii daayay, laakiin "daawashada cayaaraha iyo macluumaadka nool ayaa weli ah dhaqan caado u ah dhaqankeenna."
Disney, oo horeyba ugu firfircoon ciyaaraha telefishanka, waxay ogolaatay in ay bixiso jadwaladaan si ay u hesho ogolaansho Wasaaradda Caddaaladda ee Maraykanka si ay u iibsato hantida ugu weyn ee kooxda Fox.
Kooxdu waxay Burbank ayaan weli u daadiyaan network silsilad 22ème ah, ugu weyn, HAA Network, kaas oo daboolaya degaanka New York oo uu leeyahay xuquuqda warbaahinta maxaliga ah ee New York Yankees (baseball) iyo Brooklyn Nets (basketball) .
Sida laga soo xigtay warbaahinta dhowr, saldhiggan waa in lagu iibiyaa wadaxaajood ay ku jiraan Sinclair, laakiin sidoo kale kooxda New York Yankees iyo kooxda Amazon, oo ku saabsan qiyaasta 3,5.
Iyada oo afku ka mid ah hantida ugu weyn ee Fox 71,3 billion, oo ay ku jiraan marka laga reebo silsilad qaranka waaweyn Fox iyo wararka channel Fox News, Disney noqday kooxda koowaad ee warbaahinta iyo dunida madadaalada.
Qodobka Source: https://www.france24.com/fr/20190504-disney-cede-chaines-sportives-heritees-fox-106-milliards-dollars
Lenovo Smart Display: Kaaliyaha Google maaha diyaar u ah shaashadaha
Maamulayaasha xayeysiinta ayaa u maleynaya Netflix inay u baahan karaan inay xayeysiiyaan xayeysiinta - BGR